२०७५ साल जेठ ३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थापना भएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको नेकपा एमाले र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गरी नेकपा बनेको हो ।
मार्क्सवाद र लेनिनवादलाई आदर्श मान्दै जनताको बहुदलीय जनवाद विचारधारा बोकेको एमाले र मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादलाई आदर्श मान्दै नयाँ जनवादी विचारधाराको माओवादीबीच ‘मदन–आश्रित स्मृति दिवस’को दिन एकता भएको थियो । पार्टी एकता घोषणामा दुई अध्यक्ष रहने र दुवैले आधा-आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको पद बाँडेर लिने ‘लोभी शर्त’मा कुरा मिलेको थियो ।
त्यसपछि गुट र उपगुट मिलाएर सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी र विभागहरु गठन हुन थाले । जसले गर्दा विचार र सिद्धान्तलाई पाखा लगाउँदै कार्यकर्ताको त्याग अनि बलिदानलाई बेवास्ता गरियो ।
पार्टी घोषणाकै दिनदेखि माधव नेपाल र झलनाथ खनालबीच वरिष्ठ नेता को हो ? भन्ने लफडा शुरु भयो । त्यसलगत्तै दुई अध्यक्षबीच को १ नम्बर ? कसको कुर्सी अगाडी राख्ने ? जस्ता लोकल भट्टी पसलमा हुने राजनीतिक गफ जस्ता कुराले पार्टी बैठकमै प्रवेश पाउन थाल्यो । आफ्नो स्वार्थ अनुकूल नहुनेबित्तिकै एक पक्षले अर्को पक्षलाई आरोप लगाउँदै जाँदा मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद विकसित भएर बहुदलीय जनवाद हुँदै अहिले पार्टी ‘बर्बाद’सम्म पुग्न लागेको छ ।
दुई पाईलटले उडाएको जहाज पटक–पटक दुर्घटना नजिक पुगेर अहिले दिशाहीन अवस्थामा आकाशमै चक्कर लगाईरहेको छ । दुईजनाको झगडाले जहाज अवतरण गर्ने ताकत दुवै पाईलटमा देखिँदैन । म बाहेक अर्कोले उडायो भने जहाज दुर्घटना हुन्छ, त्यसैले म छाड्दिन भन्ने ठोकुवा गरेका ओली पाईलटलाई अर्का पाईलट प्रचण्डले ओलीको उडान सर्टिफिकेट नै नक्कली हो भनेर अन्य यात्रुलाई बुँदागत रुपमा जानकारी गराएपछि यात्रुमा भय र त्रास बढेको छ ।
दुई पाईलट वाकयुद्धमा उत्रिएपछि जहाज अनियन्त्रित भई गतिहीन भएर हल्लिन थालेको छ । जहाजमा सवार केही यात्रु समेत जहाज दुर्घटना हुँदैछ भनेर रोईकराई गर्न थालेका छन् । जहाजको ईन्जिनमै समस्या देखिन थालेको र गन्तव्यसम्म पुग्ने ग्यारेण्टी नभएपछि नेकपा नामको जहाजमा रहेका यात्रुको अनुहारबाट चमक हराएको छ ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीको अहंकार र घमण्ड अनि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलगायत सचिवालयका केहीको लगातारको ल्याङ-ल्याङले ग्रस्त भएको नेकपाको विवाद मिलाउन नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता अचम्मलाग्दो विषय छ । बाहिर हल्ला भएजस्तै यदि विगतमा एमाले पार्टीको उपाध्यक्ष भएकै आधारमा अहिलेपनि पूर्व एमाले र त्यसमा पनि पूर्व गुटकै लागि मात्रै राष्ट्रपतिले आफुलाई केन्द्रित गरेको हो भने यो खेदजनक कुरा हो । सिङ्गो देशको अभिभावकले एउटा पार्टी भित्रको पनि सानो गुटको स्वार्थमा काम गर्नु जनताको आशा, भरोसा र विश्वासमाथि घात हो ।
यदि होइन र आरोप मात्रै लगाईएको हो भने यस कुराको खण्डन राष्ट्रपति कार्यालयबाट आउनुपर्छ । नेकपाको गुटगत स्वार्थमा देशको राष्ट्रप्रमुखलाई विवादमा तान्नु दुःखद र निन्दनीय काम हुनसक्छ । कसैले हिजो पार्टीमा हुँदाको पार्टी वा गुटगत सम्बन्धलाई आधार बनाएर राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउन खोजेको हो भने उसलाई राष्ट्रपति कार्यालयको ढोका बन्द गरिनुपर्दछ ।
यदि राष्ट्रपतिकै चासो र सक्रियतामा नेकपाभित्रको विवाद अन्त्य गर्न खोजिँदै छ भने राष्ट्रपति कार्यालयलाई औपचारिकरुपमै पार्टी हेडक्‍वाटर भन्दा फरक नपर्ला कि ? यसको जवाफ जनताले मागेको बेला राष्ट्रपति कार्यालयले दिने कि नेकपाले दिने ?
एउटा पार्टीको विवाद, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन र संघीय मन्त्रीपरिषद हेरफेर अनि राजदूत नियुक्ति गर्दासम्म राष्ट्रपतिको सक्रिय भूमिका भएको भनेर बाहिरिएको हल्ला यदि साँचो हो भने शीतलनिवासलाई पार्टीको हेडक्‍वाटर भन्‍नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यो विषयमा नेकपा र यसका नेतृत्वकर्ता दुवै पाइलट लज्जित हुनुपर्ने होईन र ?
अर्कोतिर नेकपाभित्र विवाद बढ्दै जाँदा एकाएक छिमेकी देशको कर्मचारीले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु र पार्टी विवादको चासो लिनु कत्तिको जायज हुनसक्छ ? राजदूतको काम पार्टी झगडा मिलाउने हो कि आफ्नो दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ र सुमधुर बनाउने हो ?
चीनको राजदूतले नेकपाको चासो लिएजस्तै बेईजिङमा भएको नेपाली राजदूतले चीन र तिब्बतको बिषयमा चासो लिन खोज्यो भने कत्तिको सम्भव छ ? के चीनको नीतिले हाम्रो राजदूतलाई त्यसो गर्ने अधिकार दिन्छ ?
यदि होईन भने पटक–पटक हाम्रा नेताको निवासमा चीनका राजदूतको प्रवेश किन भईरहन्छ ? देश सानो भएपनि वा पार्टीहरु विभाजित भइरहेपनि एउटा पार्टीको पदको झगडामा छिमेकीको चासो किन ? राजदूतका रुपमा आएका सामान्य कर्मचारीले एउटा पार्टीको नेतासँग सिधै सम्पर्क र पटक–पटक भेटघाट गर्नु सामान्य कुरा मात्रै होईन । कि ती व्यक्तिले हाम्रो नेता, पार्टी र देश चलाईरहेको छ अथवा हाम्रो पार्टीको अदृश्य हेर्डक्वार्टर ती राजदूतको कार्यकक्षलाई बनाईएको छ ।
यसर्थ, नेकपा नामको पार्टीले पार्टीभित्रको स्वार्थी समूहको झगडामा देशको राष्ट्रपति र छिमेकी देशका राजदूत वा गुप्तचरका मान्छेलाई पटकपटक भेट गर्नु नेपाली जनताप्रतिको धोका र अपमान हो । ‘पार्टीको विवाद मिलाईदेउ मेरो पद जोगाईदेउ’ भन्दै बिन्ती गर्नुले स्वतन्त्र देश र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको भाववनामा ठेस पुर्‍याउनेबाहेक केही गर्दैन ।
त्यसैले पार्टीभित्रको झगडा पार्टीकै बैठकबाट समाधान गर वा जहाँबाट समाधान खोज्छौ त्यसलाई पार्टीको हेडक्‍वाटर कायम गर । अन्यथा तिम्रा नौटङ्कीले देशलाई जनताको जनवादतिर होईन थप बर्बादतिर धकेल्ने निश्चित छ ।
अब धेरै चटक नदेखाउ कमरेडहरु, तिम्रा चटकले जनता लज्जित भइसके, सिङ्गापुर बनाउँछु भनेको देश हस्तिनापुर हुने बेला भइसक्यो कि कमरेड !
बालुवाटारबाट सिंहदरबार सरेको शुक्रबारको एमाले वार्तामा के भयो ?
कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीले राखे पाँच मन्त्रालयको जिम्मेवारी
प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालबीच वार्ता सुरु
सरकारको सम्पूर्ण सामर्थ्य कोरोना रोकथाम र संक्रमितको उपचारमा लगाउँछाैं: अर्थमन्त्री पौडेल
महामारी रोकथाममा एकजुट भएर लाग्न प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वान
ओलीले लिए तेस्रो कार्यकालको शपथ
नेपालले बोलाए आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक
सांसदको टाउको गन्न छाडेर अब जनताको जीवनरक्षामा लागौंः थापा
परिवर्तनविरोध प्रतिगामी शक्तिविरुद्ध एकतावद्ध र सचेत होऔंः प्रचण्ड
ह्याट्रिक गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको सपथ साढे दुई बजे
एमालेका जिल्ला नेता भन्छन्- अब प्रचण्डलाई पनि ल्याउनुपर्छ !
सार्वजनिक भयो कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवरण, गुनासो भए के गर्ने ?
कुर्सी जोगाउन आफ्नो निर्णयबाट पछि हटे ओली, विवाद मिलाउन कार्यदल बन्यो
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीको शपथग्रहण आज
कांग्रेस, जसपा र नेपाल–खनालको निर्णय आएपछि मात्रै संयुक्त सरकारको प्रक्रिया अघि बढाउने माओवादीको निष्कर्ष
फागुन २८ को निर्णय सच्चाउन ओली तयार
ओली-नेपालको वार्ता सकरात्मक, नेपाल भन्छन- हाम्रो राजीनामा दुईचार दिन टर्‍यो
महेश बस्नेतको व्यवस्थापनमा पूर्व राजपाका १३ सांसद रिसोर्टमा
दाहालले बोलाए स्थायी समिति
काठमाडौं, ३१ वैशाख ।प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच सिंहदरबारमा...
छिमेकमा दैनिक सङ्क्रमितभन्दा निको हुनेको संख्या बढी
नयाँ दिल्ली, ३१ बैशाख । भारतमा कोभिड–१९ बाट दैनिक सङ्क्रमण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या भन्दा निको हुनेको सङ्ख्या बढी भएको केन्द्रीय...